Kunyange zvazvo zvinonyatsorehwa paanochinja kwoupfumi 2015, asi chidzitiro pakudhinda indasitiri ichiri kubudirira nemigumisiro yakanaka, mugore rino, vakawanda nechidzitiro kudhinda makambani kubudikidza chigadzirwa Optimization, zvekuvaka kusangana nezvimwe kusanduka, vachitarisira kusvika nokukurumidza kubvuta indasitiri wacho Kurayira miti, idzo vanosimudzira The Kugadzirwa chidzitiro yokudhinda indasitiri. Parizvino, nechidzitiro yokudhinda yave mberi nani uye nani zvose kushandisa michina michina, unhu vimbiso ano, uye vari padanho midziyo uye zvinhu mukugadzira.
Kukura chidzitiro zvokudhinda indasitiri, inks, nokudzitira kudhinda sefa, uye kudhinda michina kazhinji hanya. Zvisinei, vanhu vashoma ndivo vanofarira chidzitiro kudhinda uye squeegee. Zvisinei, squeegee basa rinokosha iri fineness uye kutsiga yokudhinda. Basa. Changzhou Preet Printing Technology Co., Ltd. (rakapfupikiswa se "Platt") riri nyanzvi nokutengesa chinovhara yokudhinda consumables. Under kwayo kukuru tsvakurudzo uye nesimba basa, SPS nemazvo Chinovhara Printing uye Squeegee zvishoma nezvisho- akunda kuziva kumusika uye indasitiri. Zvikuru nomukurumbira. Muna 2016, Pratt makuru zvigadzirwa vari SPS-FGB Washington City Offices tichibvisa uye SPS-FGB-AS kabhoni faibha antistatic tichibvisa.
Kunakisa SPS-FGB Washington City Offices tichibvisa ndechokuti girazi internet bhodhi inotsigira tichibvisa guruu. Kunyange kana tichibvisa guruu chaibva ari ingi kwenguva refu, kudhinda haakurumidzi akaremara. Naizvozvo SPS-FGB regirazi internet bhodhi tichibvisa guruu kungaita yakagadzikana kudhinda nevezera. , Kuwirirana kudhindwa yorusvingo, mukuru abrasion kuzvidzivirira uye solvent nemishonga, zvakakodzera kuti zvakarurama chidzitiro pakudhinda indasitiri zvakadai mitsetse yakaisvonaka, dot kudhinda, uye firimu ukobvu kuzvidzora, akadai: musabata chidzitiro dema uye chena pabutiro chinovhara yokudhinda, kubata nechidzitiro TP sirivha firimu ukobvu kudzora (kuchengetedza 8% Silver namatidza), Home Appliance Kushongedza Industry Transparent Color & tira Printing, Home Appliance Kushongedza Industry Pearl powder Printing (Chinovhara Printing Easy To Ink), Automobile Dashboard Industry kwesha Inks Uye Transparent Color Printing, Light Guide ndiro Industry tira Printing, RF Label vakanaka Silver Line kudhinda, photovoltaic afoot mutsetse kudhinda uye zvichingodaro.
SPS-FGB-AS kabhoni faibha Anti-kunofambira mberi squeegee haangogoni zvizere mabasa FGB Washington City Offices squeegee, zvinogonawo kusunungura kunofambira mberi nemagetsi panguva nokudhinda. Nokuti SPS-FGB-AS Anti-kunofambira mberi kabhoni faibha tichibvisa guruu chakagadzirwa conductive kabhoni internet bhodhi uye Anti-kunofambira mberi AS tichibvisa guruu, AS tichibvisa rabha anogona kubudirira kuderedza tichibvisa nemishonga kukosha 10 MΩ, izvo zvinogona kubudiswa panguva rokudhinda urongwa. The kunofambira mberi magetsi, kudzivisa electrostatic kuunganidza ari chidzitiro nokudhinda uye Chiitiko dzinocherwa uye kubhururuka ingi, uko chaizvo kuwedzera kunaka chigadzirwa.
Quality anopa chigadzirwa ushamwari, kunoratidza hunhu chekambani, uye ari zvakare mukana kuti kukura kambani. Nokuti chigadzirwa quality, Prete zvakasimba anodzora pakugadzira zvinhu, adopts kwesayenzi kugadzirwa pezvakaitwa, uye anoita kuongorora maitirwe ezvinhu. Nemaonero musika mugove, Pret kwakaita nzira yabudirira nemigumisiro yakanaka chaizvo. Asi Pret kwakaita rinorema zvombo hakungogumiri ichi. Munguva ruzivo basa vaifarira, Pretto anoisa basa kutanga kukura zvebhizimisi, uye ane rakakwana yokutengesa nomumbure uye pre-rokutengesa uye pashure-okutengesa basa hurongwa. Online pre-rokutengesa hwokugadzira kubvunza zvinogona kuitwa kubva paIndaneti uye is migero, uye rationalization zvirongwa uye pashure-okutengesa Standardization mabasa kunogona kuwanikwa panguva sale, kuti kugutsa mutengi zvinodiwa kusvika kunonyanyisa napo. Pratt kuti basa: pakatanga esiriki chidzitiro okudhindira zvigadzirwa zvitsva, pezvakaitwa itsva, uye inoita kuti pave esiriki chinovhara indasitiri.